26/03: Miadana ve ianao?
Sokajy: Fiainana andavanandro
Mampalahelo ahy tokoa ianao raha tsy manana an'i Jesosy satria Izy irery ihany no manome ilay Fiadanana maharitra ary dia zava-poana avokoa ny rehetra raha tsy misy Azy.
08/12: Ny fialana amin'ny lainga
Eo anatrehan'Andriamanitra ny lainga dia fahotana avy amin'ny "rain'ny lainga" toy ny fahotana hafa rehetra (halatra, vono olona, fimamoana, fijangajangana, sns...)
Vakio ny tohiny
29/05: Fanandramana sy fialofana
"Andramo ka izahao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy" Salamo 34:8
Inona tokoa moa no tsy efa nandramantsika Malagasy tsy ankanavaka? Efa nandramantsika daholo izao rehetra izao. Valalanina sy kivy anefa isika satria toa tsy hita izay vokatra tsara na dia efa nandramantsika koa aza i Jehovah.
28/06: Izany no fahalalahana amin'ny asan-gazety!
Tsy nomena toerana tao amin'ny "board" (na ihany koa "conseil d'administration") an'ny orinasa tsy miankina Fairfax Media i Ramatoa Gina Reinhart na dia manakaiky ny 20% aza ny petra-bolany ao amin'io orinasa fanaovan-gazety io. Ny antony dia noho izy tsy nety nanao sonia ny fifanarahana izay mifehy ny asa fanaovan-gazety ka mety hanohitohina ny fahalalahan'ny mpanao gazetiNy izay karamainy.
15/04: Ny Razana sa i Jesosy Kristy?
Mbola maro ireo Malagasy no diso hevitra sy manantena fitahian'ny razana. Ankoatr'ireo mangata-pitahiana amin'ny razana dia misy koa ireo miseho mivantana miantso tromba sy fanahin'ny maty, izay heveriny fa afaka manampy azy satria tsy takatry ny sainy.
Toy ny olona mirodorodo mangata-pitahiana amin'ny razana dia mihazakazaka mankany am-pasana koa ny mpanao ody sy mpamosavy; ary tsy zava-baovao amin'ny Malagasy intsony izany mpamosavy milalao faty izany. Tsy misy mijoro amin'ny herin'i Kristy izy ireny na dia iray aza. Fanahin'ny devoly no tompoin'izy ireny na voafitaka izy na tsia.
29/03: Famotsoran-keloka, famelan-keloka / Amnistie
Resaka mameno ny haino aman-jery tato ho ato ny famotsoran-keloka/famelan-keloka na "amnistie". Hita tamin'izany ireo karazan'olona mpanameloka sy milaza fa ny toy izao sy toy izao dia tsy mendrika omena famotsoran-keloka. Etsy an-daniny koa dia misy ireo manambara fa tsy meloka ka tsy mitady izany famotsoran-keloka izany.
05/03: Ny atao hoe fiadanana
Ny mampiavaka ny mpino Kristianina dia izy tsy miroroha saina fa manana ilay fiadanana anatiny, na dia eo aza ny olana maro mitranga eo amin'ny fiaraha-monina misy azy.
14/11: Mpitandro ny filaminana sy ny taoka
Any amin'ny firenena tan-dalana dia hentitra ny fitsipi-pifehezana misy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Voaraoka eo no ho eo ireo manao kitoatoa fa tsy misy fandeferana amin'ny "mpitandro filaminana" mandika ny fitsipika lehibe.
Ohatra amin'izany ny fanaraha-maso azy ireny amin'ny tsy tokony hisotroany taoka mialoha ny asa na am-perinasa na dia kely monja aza. »